लिफ्ट दिएर १३ वर्षीया बालिकालाई ट्रकभित्रै बलात्कार, काभ्रेबाट दुई पक्राउ ! « MNTVONLINE.COM
लिफ्ट दिएर १३ वर्षीया बालिकालाई ट्रकभित्रै बलात्कार, काभ्रेबाट दुई पक्राउ !
काठमाडौँ । भक्तपुरमा गाडी पर्खिरहेकी एक बालिकालाई गाडी भित्रै बलात्कार गर्ने दुई पक्राउ परेका छन् । भक्तपुरबाट ट्रकमा लगेर काभ्रेमा चालक र सहचालकले बलात्कार गरेका हुन् ।
पक्राउ पर्नेमा झापा हल्दिबारी गाउँपालिका–५ का ३२ वर्षीय हर्कबहादुर विश्वकर्मा र मोरङ उर्लाबारी नगरपालिका–१ का १८ वर्षीय निदिप धिमाल रहेका छन् ।
उनीहरुलाई मंगलबार प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । भदौ २६ गते भक्तपुरको श्रृजनानगर स्थित सडकमा पूर्वतर्फ जानको लागि बालिका गाडी कुरिरहेकी थिइन् ।
उनीहरुले ट्रकमा गन्तव्यसम्म पुर्याइदिने भन्दै ट्रकमा चढाएका थिए । काभ्रेपलान्चोकको बनेपा–१२ स्थित साझा पेट्रोल पम्प अगाडि रोकेर गाडी भित्रै चालक र सहचालकले पालैपालो बलात्कार गरेको पिडित बालिकाले बताएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
बलात्कारपछि बालिकालाई सोही स्थानमा छाडेर उनीहरु पूर्वतर्फ भागेका थिए । पक्राउ परेका व्यक्तिले घटनाबारे कसैलाई भने ज्यान मार्ने धम्की दिएपछि उनी बुवा–आमाकहाँ फर्किएकी थिइन् । बुवाआमाले अस्वाभाविक रुपमा छोरीलाई देखेपछि सोध्दा उनले घटनाबारे बताएको प्रहरीले जनाएको छ ।
रुपन्देही घर भएकी ती बालिका भक्तपुरको सल्लाघारीमा बुवा–आमासँग बस्दै आएकी थिइन् । त्यसदिन उनी मध्यराति किन गाडी रोकेर किन हिँड्न खोजिन् भन्ने विषय अनुसन्धानमा भैरहेको काभ्रे प्रहरीले जनाएको छ ।
अनुसन्धानका क्रममा प्रदेश २–०३–००१ ख १४८५ नम्बरको भाडाको ट्रक खुलेको र उक्त ट्रक मोरङबाट बीपी राजमार्गको बाटो हुँदै काठमाडौं तर्फ आउँदै छ भन्ने सूचनाको आधारमा मंगलबार प्रहरीले धुलीखेल चोकबाट उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।
प्रारम्भिक अनुसन्धानको क्रममा उनीहरूको संलग्नता पुष्टि भएको प्रहरीले दाबी गरेको छ । पीडितबाट जबरजस्ती करणी सम्बन्धी कसूरमा किटानी जाहेरी लिई काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरी आवश्यक अनुसन्धान भईरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेले जनाएको छ ।